Cnc machining services, Cnc machine psac Zvikamu, nemazvo machine - Weldo
Dong Guan Weldo Precision Machining Co, Ltd ndeye ISO 9001 inogoneswa inogadzira, yakavambwa muna 2008. Production saiti iri munyika inozivikanwa maindasitiri eguta-DongGuan. Tiri nyanzvi muna NC & CNC machine basa uye assemling basa OEM uye ODM zvikamu. Mhando dzinosanganisira kutendeuka, kugaya, kukuya, kutsika, kukotama, kutenderera, kufa kukanda, kuchera uye kutaipa. Iyo inodarika 6, 000 mativi emamita ekugadzira nzvimbo inoshandiswa neakakwira kuburitsa kugona kuburitsa zvakanaka vanokwanisa zvikamu zvemhando dzakasiyana dzemabhizimusi senge midhi ...
Mutengi wedu anowanikwa muAsia, North America neEurope, isu takazvipira kuburitsa uye kupa yakakwira mhando chaiyo cnc machine zvikamu uye zvikamu kune vatengi kutenderera pasirese. Izvo zvigadzirwa zvinoshandiswa muindasitiri yekurapa, semiconductor indasitiri, michina indasitiri uye zvichingodaro.
Tine nyanzvi timu yeinjiniya uye vane ruzivo mahunyanzvi, nesimba redu rese uye nechido, tarisa pakupa vatengi vane zvigadzirwa zvepamusoro uye zvemhando yepamusoro kuti uve mudiwa wako akavimbika.
Dongguan Weldo nemazvo machine Co., Ltd. iri ISO 9001 inosimbiswa mugadziri.
Iyo yekugadzira base mune izwi rakakurumbira maindasitiri guta-Dongguan. Kambani yedu ine anopfuura zviuru zvitanhatu zvemamirimita emafekitori nzvimbo, inochengetedza chaiyo cnc machine masevhisi uye masevhisi egungano eOEM neODM zvikamu.
Iwe unoda kusimudza mibvunzo yako nezvedu?
Chero ipi yemakosi edu inogona kukubatsira iwe kuita izvi!
Dong Guan Weldo Precision Machining Co, ltd, inova inogadzira inonyanya kugadzirisa zvikamu zvemuchina nehupfumi hwekugadzira uye dhizaini yekugadzira.
Western Union, Mari, Gram, Escrow kana Paypal T / T, kubhangi kuchinjisa. (50% sedipoziti mushure mekusimbisa kubhadhara, uye 50% seyero usati watumira.
Yakakwira Precision Tsika Cnc machine Aluminium Zvikamu Metal Machine Zvikamu
CNC Stainless Simbi Chikamu / Simbi Isimbi Chikamu / Simbi Isina Kupara Zvikamu
Chigadzirwa Kunyorera Nharaunda
Zvakajairika Kugadziridza Zvishandiso
Zvishongedzo zvemaski muchina wemagetsi batira ayo pe ...
Hunyanzvi hwekuita uye musimboti wekushanda weyemagetsi clutch yekuwana ...
Zvimiro uye Zvitarisiko zveMakina Mashini Zvikamu Proce ...
Iyo chaiyo machining indasitiri yagara iri yebasa-yakasimba, capital-nyanyisa, uye techno ...
Tinoziva kuti nemazvo machine ane yakakwirira zvinodiwa kuti zvakarurama, nemazvo machine ane goo ...
Hunyanzvi hwekuita uye musimboti wekushanda wemagetsi emagetsi clutch yezvishongedzo zvemaski muchina. Iyo yemagetsi clu ...
Iyo chaiyo machining indasitiri yagara iri yebasa-inotyisa, capital-nyanyisa, uye tekinoroji-nyanyisa indasitiri. Iyo indasitiri ine yakakwira t ...
Tinoziva kuti nemazvo machine ine yakakwirira zvinodiwa kuti nemazvo, nemazvo machine ane kuomarara zvakanaka, mukuru kugadzira nemazvo, uye accu ...
Mushure mekutengesaYekutanga kirasi mushure-yekutengesa sevhisi
Isu tanga tiri anovimbwa kugadzira mutengesi mundima ino kweanopfuura makore gumi nemaviri, isu takavaka mukurumbira mukurumbira pahunhu, kushandira vatengi uye kushandisa nyika -ye-ye-yehunyanzvi michina
inopa masevhisi ekumisikidza ese akazara ezvigadzirwa